२२ कात्तिक, रुपन्देही । जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको संविधान संशोधन नभए जनताले अर्को संविधान बनाउने चेतावनी दिएका छन् । पार्टीले रुपन्देहीको धकधईमा गरेको कार्यक्रममा उनले संघीयता विरोधीले नै संविधान बनाएकाले संविधानको संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए । ‘कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर बनाएको संविधान त्रुटिपूर्ण छ’, यादवले भने, ‘यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ अन्यथा जनताले […]
यो संविधान खारेज गर्ने कि संशोधन गरेर जोगाउने ?
हामी किन संविधान दिवस मनाउँदैछौं ? औपचारिकता हो कि परम्परा ? आज पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी जानुभयो (टुँडिखेलमा संविधान दिवस मनाउन), पञ्चायतकालमा त सेनाले ड्याङडुङ बन्दुक पड्काएपछि संविधान दिवस मनाएको मानिन्थ्यो । संविधान दिवसको महत्व के छ ? मैले अघि विमलेन्द्रजीलाई सोधें । के हाम्रो पार्टी (नेपाली कांग्रेस)ले आज सर्कुलर गरेको छ ७७ वटै जिल्लामा संविधान दिवस मनाउन ? सर्कुलर गरेको छैन भने हामी नेपाली कांग्रेस […]
मिरा बस्नेतकाठमाडौं, असोज ३ । तत्कालिन विभिन्न राजनीतिक दलको असहमतिबीच ६ वर्षअघि नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । नेपालको संविधानले संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व तोकिदियो । तर संविधान जारि भएको ५ वर्षको अवधिमा संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकबाटै बारम्बार संविधानको धज्जी उडाइयो । विभिन्न जालझेलबीच जारी भएको संविधान ६ वर्षमा २ पटक […]
काठमाण्डाै – नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित संविधान सभा संविधान दिन नसकेर स्वतः विघटन भयो । पहिलो संविधान सभाबाट चार कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । तर संविधान बन्न सकेन । दोस्रो संविधान सभाका ९० प्रतिशत सदस्यले पारित गरी मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संविधान जारी नगर्न छिमेकी देश भारतले चर्को दबाब बढाएको थियो । त्यसका बाबजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न कसरी सम्भव भयो त ? हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दि...
काठमाडौँ– लामो समय र अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर संविधानसभाबाट नेपालको सातौँ संविधान जारी भएको आइतबार ६ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी गर्दा पक्षमा रहेका र विपक्षमा रहेका दलहरू अहिले एकै स्थानमा देखिन्छन् । उनीहरू दुवै पक्ष अहिले संविधानमा खोट देखाइरहेका छन् । संविधान जारी गर्दा नेतृत्व लिएका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमेत संविधानको प्रावधान […]
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष बित्यो । संविधान दिवस मनाइरहँदा एउटा पक्ष भने असन्तुष्ट छ । संघीयतासँग जोडिएको विषयसँगै मधेसमा देखिएको नागरिकतासम्बन्धी विवादले लाखौं नेपाली नागरिकताविहीन अवस्थामा छन् ।
सातौं संविधान दिवसमा यस्तो देखियो टुँडिखेल
आज असोज ३ गते अर्थात संविधान दिवस। ०७२ असोज ३ गते अर्थात आजकै दिन संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो। यस अवसरमा सरकारले काठमाडौंको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा संविधान दिवस मनाएको छ। संविधान दिवस मुल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर…
आज नेपालको संविधान जारी भएको दिन । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ ६ वर्षको आयु पूरा गरी सातौँ वर्षमा लागेको छ । सात दशकमा नेपालको यो सातौँ संविधान हो । विगतमा शासकवर्गले एकल...
काठमाडौं । आज संविधान दिवस । संविधानसभाबाट नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुगेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाको पालाका नेपालले नयाँ संविधान पाएको हो । दक्षिणको छिमेकी भारतको प्रत्यक्ष असहमति र नेपालकै मधेश केन्द्रित दलहरुको विरोधका बिच मुख्य तिन दल कांग्रेस एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा मुलुकमा जनताबाट […]
संविधानविद् अधिकारीको टिप्पणी : संविधान निर्माताबाटै संविधान कार्यान्वयन संकटमा
काठमाडौं। संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधान निर्माताहरुबाटै संविधान कार्यान्वयन संकटमा परेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले संविधानप्रति गुनासो हुनेहरु संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्न बाध्य भएको बताए। ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन्,“पक्ष र प्रतिपक्ष रहेका संविधान निर्माताहरुबाटै संविधानलाई कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती पो उर्लिदैछ। कस्तो बिडम्बना!” पछिल्लो पटक संविधानलाई नै मास्न भइरहेको गतिविधिप्रति उनले आशंका व्यक्त गर्दै यस्तो चिन्ता प्रकट गरेका हुन्।